Uhulumende Ucela Imali Yokhetho kuUNDP
Saturday, February 13, 2016 Local time: 06:31
WASHINGTON DC— Uhulumende selobele inhlanganiso yeUnited Nations Development Program (UNDP) ecela izigigi ezedlula amakhulu amabili zamadollar, i$225 million yokuqhuba ukhetho kanye le-referendum yesisekelo sombuso esitsha.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Tendai Biti lomphathintambo wezemithetho uMnumzana Patrick Chinamasa babhalele iUNDP incwadi ngoMvulo besithi uhulumende udinga izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye, i$250 million yokuqhuba lumsebenzi, kodwa kathesi ule$25 million kuphela.
Ngalokho, uBiti loChinamasa bathi uhulumende ucela inhlanganiso le imdingele imali esilelayo.
Ilizwe selikhangelelwe ukuqhuba i-referendum phezu kwesisekelo sombuso kusikhatshana esizayo kulandela ukwamukelwa kwaso lidale lephalamende kanye leleSenate.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnu Rejoice Ngwenya uthi kuyadanisa ukuthi ilizwe lihlala lingelicela imali lona lilenotho enengi egoqela amadayimana athengiswa kungaziwa ukuthi imali etholakalayo iya ngaphi.
Ingxoxo LoMnu Rejoice Ngwenyai